Manasa hermetic compressor C-L15M8E - China AOXIN HVAC PART
Manasa hermetic compressor C-L15M8E
name: manasa hermetic compressor
Evaporating Temp: -40 ℃ ~ -5 ℃
Ambient Temp: 5 ℃ ~ 40 ℃
Anarana Output: 1.5KW
Power loharano: 380V-415V / 440V 3φ 50Hz
Powe loharano 380-415V3φ50HZ 440V3φ60HZ
Toetra mampiavaka ny Sanyocompressor :
1. Avo angovo sy ny fahaiza-miasa mahomby angovo famonjena;
2. Low tabataba sy asa mangina;
3. Ampiasao ny tontolo iainana refrigerants mba hiarovana ny tontolo iainana;
4. High azo itokisana, ny lavany, ary azo antoka fandidiana.
Previous: Manasa hermetic compressor C-L22M8B
Next: CMA LG Reciprocating R600A vata fampangatsiahana Portable Compressor vata fampangatsiahana & vata fampangatsiahana
Manasa hermetic compressor C-L28M8E
R22 Series B fahombiazana avo dingana roa horonan-taratasy d ...
Famaritana Constant hafainganam-pandeha (R22, LSS 50Hz)